Tag: na-adịghị mpi | Martech Zone
Tag: adighi mpi
John Jantsch na-ajụ nnukwu ajụjụ, you nwere Social Media Na-abụghị Mpi? Ajụjụ ọzọ nwere ike ịbụ, "alọ ọrụ ọ nwere ike ịmanye ndị mgbasa ozi na-abụghị ndị mpi?" Lọ ikpe adịgboroja na-ewe iwe maka mmachi ndị ndị were mmadụ n'ọrụ tinyere ikike ndị ọrụ ha nwere ịchọ na ibi ndụ. Ebe ọ bụ na a na-amanye ọtụtụ ụlọ ọrụ ka ha jiri usoro mgbasa ozi na-agba ndị ọrụ ha ume ka ha sonye, ​​olee otu anyị ga-esi atụ anya na ndị ọrụ mbụ agaghị? Ọ bụ ihe mgbagwoju anya maka ụlọ ọrụ, mana